EC-Council - ụlọ akwụkwọ ITS Tech
Onye India na-eduzi onye ọrụ ọrụ EC-Council Traininger
Usoro Mmemme Na-agụnye
Ọchịchị & Nhazi
Ogwe aka na-aka
Usoro EC Programme
Ngw'ọma dị mma Ngwọta maka ndị ahịa anyị iji nyere ha aka maka uto ha.
Na-enyocha ụwa nkeEgwuregwu HACKINGna teknụzụ & nkà na ụzụ kachasị elu
Nzube ime ka nchedo ozi nchebe nke nzukọ gị dịkwuo mma?
Ị nọ n'ụzọ ziri ezi! EC-Council esitewo na CEH v10 - mbipụta nke iri nke akwụkwọ kachasị mma akwụkwọ ikike Hacker. Ntughari ohuru nke CEH nke ntinye aka na-ekpuchi 20 nke ngalaba kachasị elu na nke na-emekarị nchebe. CEH v10 gụnyere 340 ọgụ ndị na-eji ngwa ngwa site na 20 zuru oke modul.
Nanị ọzụzụ anyị na-enye n'efu na CEH v10 na-elekwasị anya n'akụkụ ọ bụla nke na-eweta ọganihu gị. A na-ahazi usoro ahụ n'ụzọ na-eme ka ị bụrụ onye ọkachamara nke ụkpụrụ omume hacking ụkpụrụ nke a na-ahaziri maka ịbanye ule ma ọ bụ ọnọdụ hacking ọnọdụ. Ị ga-eji usoro nkà na ụzụ na-arụ ọrụ nke ọma na nchịkọta nke ngwá ọrụ ọhụrụ nke na-emekarị ka ọ dị mkpa ma dị mkpa maka ndị na-ahụ maka nchebe na ndị na-agba akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ofe nyocha. Ị ga-azụlite nkà nke ga - eme ka ị nweta akwụkwọ ikikere Certified Ethical Hacker nke zuru ụwa ọnụ!